China Ring-yakadhonzwa gaba rinokwanisa kurongedza zvekudya uye fomula_mukaka wehupfu fekitori uye vagadziri | Byland
Mhete inodhonzwa mhete yekurongedza zvinovaka muviri uye fomula_mukaka upfu
Nutrition Tin ndiwo akakwana mapakeji emukaka hupfu, cashews, nzungu musanganiswa, zvinwiwa uye zvimwe. Anoshongedza maratiki ezvekudya uye hermetically akanamwa matini anowedzera sherefu hupenyu uye pasherefu kukanganisa. Tsika dzekushongedza tini dzakakura kusimudzira kurongedza kwekuzivikanwa kwechiratidzo.
Nutrition Tin Makani - Hermetic uye Yakakiiwa Seam
Nenzvimbo Inogona kupa masheya uye echinyakare matinji ezvekudya nemhando dzakasiyana dzekuvhara dzinochengetedza kutsva. Yedu yekushongedza simbi snap yekuvhara inopa nzira yekushongedza yekudzosera zvakare iyo can mushure meiyo hermetic chisimbiso chaputswa. Izvi zvinowedzera mukuunganidzwa kweanogona. Pamusoro pematini ehemmetic, isu tinogadzira yakakiiwa-musoni zvipo tini ine akawanda-makamuri liners kune akasiyana ehutano maputuru, nzungu, zvinwiwa. Nutrition tin uye mabutiro anogona kudhindwa nemubairo-anokunda magiraidhi akanyorwa kana akanyorwa.
Stock Makani uye magumo Anopa:
5-1 / 8 "x 3-11 / 16", yakavhurika kumusoro inogona, isina-beaded, yakajeka mukati, yakavharidzirwa kunze, plug end foil magumo uye welded yepadivi seam, yakarongedzwa 108 pakatoni
5-1 / 8 "x 3-11 / 16", yakavhurika kumusoro inogona, isina-beaded, isina tini kana lacquered, Peel Off magumo uye welded yepadivi seam, yakarongedzwa 108 pakatoni
6-3 / 16 "x 3", isina-beaded can, yakajeka tini mukati, yakavezwa kunze, plug plug foil uye yakasungwa simbi seam, yakazara 108 / katoni
6-3 / 16 "x 3", isina-beaded can, isina tini kana lacquered, Peel Off magumo uye welded yemukati musoni, yakazara 686 / tereyi
6-3 / 16 "x 4", isina-beaded inogona, yakajeka mukati, yakavharidzirwa kunze, plug foil magumo uye welded side seam, yakazara 84 / carton, 539 / tray
6-3 / 16 "x 5", ine beaded can, yakajeka mukati, yakavharidzirwa kunze, plug foil end uye welded side seam, yakazara 441 / tray
6-3 / 16 "x 5", ine beaded can, iri mukati mukati, yakanamirwa kunze kunze, Peel Off magumo uye welded side seam, yakazara 441 / tray
502 uye 603 magumo akatengeswa nepallet
Pashure: Metal tinplate bhokisi rekurongedza makuki-Biscuit-Mazai Roll_tin bhokisi
Zvadaro: Yakatenderera uye Rectangle Tin bhokisi reChipo Packaging
100ml-250ml-500ml-1L-3L Kubika mafuta camellia se ...
3-chidimbu simbi tinplate inogona kurongedza Inwa ...
Tinplate inogona nealuminium EOE yakavharirwa pakiti ...